Storelọ ahịa na-ekesa - tolọ ahịa a na-ekesa Moontoast bụ ụlọ ahịa na-echekwa ihu na webụsaịtị ọ bụla ma kesaa n'ofe netwọkụ mmekọrịta yana site na email. Anyị wuru Storelọ Akesa ka ikwe ka ụdị dị iche iche, ndị egwu, ndị mbipụta, na ndị ama ama gbasaa eCommerce ha site na ị nweta onyinye ozugbo na obodo ha. Dum ịzụ ahịa na ahụmịhe azụmahịa dị n'ime ụlọ ahịa ahụ, na-eme ka usoro ịzụ ahịa ngwa ngwa ma dị mfe.
Storelọ ahịa a na-ekesa Moontoast bụ ngwa ọrụ na-enye ndị ahịa ohere ịmepụta ma kesaa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'ofe netwọkụ mmekọrịta, blọọgụ, netwọk mgbasa ozi na saịtị mmekọ. Mana gịnị na-eme ka ngwaahịa a pụta ìhè site na narị otu narị ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya na ahịa ahịa karịrị akarị? Azịza ya dị na nhọrọ nhọrọ ịzụ ahịa ọhụrụ.
Moontoast Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ bụ ngwa zuru oke iji kwado ụlọ ahịa ndị dị otú ahụ. Na ngwa ọrụ a, ndị ahịa na-enweta nghọta bara uru banyere omume ndị ahịa, iji bulie onyinye ma mee ka ọ ghara iguzogide ndị ahịa ezubere iche. N'otu aka ahụ, ngwá ọrụ ahụ na-eme ka nsuso nsuso na azụmahịa, ịchọta usoro na usoro, na-ekwe ka ika ahụ nọrọ n'oge kwesịrị ekwesị yana ebe kwesịrị ekwesị. Ngwaọrụ a na-enyere aka ịtụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịkwado na ị nweta ego ọnụ ma na - enyere aka iji chọpụta ROF ma ọ bụ Laghachi na ya Fans.